Tilmaamidda Shakhsiyeed ee Warbaahinta Bulshadu waa Suuqgeynta ugu Daacad-la'aanta badan ee jirta | Martech Zone
Tilmaamidda Shakhsi ahaaneed ee Warbaahinta Bulshada ayaa ah Suuqgeynta ugu Damiicsan ee jirta
Sabti, Sebtember 17, 2016 Sabti, Sebtember 17, 2016 Douglas Karr
Iska ilow cuntada iyo xayeysiiska shukaansi; Waxaan u maleynayaa in qaar ka mid ah suuqgeynta ugu khiyaano badan ay jirto internetka ay yihiin khabiiro suuq geyn ah oo sii wadaya dhaleeceynta noocyada iyo ku wacdinta daahfurnaanta internetka.
Iyagu waa wax uun laakiin hufan.
Waxaan joogaa waqti xiiso badan noloshayda. Ganacsigeygu sifiican ayuu u socdaa, nolosheyda shaqsiyadeed waa weyn tahay, caafimaadkeyguna wuu soo fiicnaanayaa bil kasta oo dhaafto. Taasi waxay tidhi, ganacsigeenna iyo noloshayda gaarka ah weli waxay leeyihiin caqabado aad u weyn. Waan ku kaftamayaa taas, hadda markaan bilaabay ganacsiyo aan anigu ahay shaqo la'aan, Marnaba kuma laaban doono shaqo waqti buuxa ah. Sababtaas awgeed, uma baahnid inaan indho sarcaad ku sameeyo oo aan ku ilaaliyo sumcad qumman khadka tooska ah.
Bishii la soo dhaafay, waxaan la sheekaystay dad yar oo ay ku muujiyeen wadahadalladayda khadka tooska ah. Barta Facebook-ga, waxaan uga doodaa ugana doodaa siyaasadda iyo diinta cabsi badan. Waxaan ku lahaa dad aad u tiro yar oo ku takhasusay warshadaha oo iga daba taga wixii faallooyin ah ee aan sameeyay ama maqaallo aan la wadaagay. Dadka aan igu raacsaneyn waxay ii sheegaan inaan ganacsigeyga ku dhaawacaayo anigoo ka hadlaya qoryaha, ilaahey, iyo siyaasada. Dadka sidaas sameeya heshiiyaan aniga oo aamusnaan leh dhinac ii jiido oo aan kuugu mahadceliyo talooyinka… in kasta oo aysan ku dhiirranayn inay jeclaadaan ama ka faalloodaan sheekooyinka aan la wadaago.
Waxaan badiyaa la wadaaga labada qofba inaan lahaa barbaarin ka duwan tii hore. Waxaan ku koray Roman Catholic, laakiin kalabar qoyskeygu waa yuhuud. Aabbahay wuxuu ahaa muxaafid xagjir ah, ruug cadaa ah, oo waddani ah… laakiin hooyaday waxay ahayd Faransiis-Canadian ah oo qoys reer Yurub ah oo xor ah. Waxaa la igu dhiirrigeliyey inaan hadlo oo doodo. Ixtiraamna fikradaha beddelka ah ayaa dalbaday labada dhinac ee qoyskeyga.
Tani waxay ahayd duco ama habaar. Koray, weligay kama baqin iska horimaad ixtiraam leh. Waxay igu heshay xoogaa dhibaato dugsiga sare. Markii aan qalin jabiyay ka dib, ka mid noqoshada ciidanka badda ayaa i bartay edbinta iyo ixtiraamka. Markii aan ku biiray shaqaalaha, waxaa ila taliyay hoggaamiyeyaal dhiirrigaliyay madax-bannaanida iyo mas'uuliyadda shakhsi ahaaneed. Ku dar intaas oo dhan, waxayna ka dhigeysaa dabeyl aad u kacsan. Taas ayaa loo tarjumay joogitaankayga khadka tooska ah.
Igu filan. Si la yaab leh, taasi waa xayawaanka xayawaanka ah ee hoggaamiyeyaal badan oo warshadeed khadka tooska ah. Wadaaggooda aan dhammaadka lahayn ee noloshooda qumman ayaa i caajisay.
Waxaa laga yaabaa inay tahay jawigayaga siyaasadeed ee kala qaybsan ee lagu daray daacad darrada internetka, laakiin waxaan u maleynayaa inay tahay wax laga xumaado. Kaliya maahan inuu yahay dibi caadi ah, laakiin sidoo kale waxaan aad ugu sii adkaan doonaa inaan idhaahdo labadaba waa xumaan iyo xitaa khatar. Waxaa laga yaabaa in diintaada iyo siyaasadaadu tahay mid shaqsiyadeed oo aysan aheyn wax aad dooneyso inaad shaaciso; Waan ixtiraami karaa taas. Laakiin waxa aanan ixtiraami karin waa durdur aan dhammaad lahayn oo ku saabsan sida noloshaadu u qumman tahay iyo sida cajiibka ah ee ganacsigaagu u qabanayo.
Miyaad qiyaasi kartaa inaad tahay qof ka shaqeynaya koritaankaaga shaqsiyadeed iyo kan xirfad ahaaneed, oo waxa kaliya ee aad ku aragto khadka tooska ah waa dadka aad ka eegto khadka tooska ah weligoodna ma halgamayaan? Waxay ila tahay inay daciifinayso. Waxaan aaminsanahay inaan labadaba shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba ka guuleysanahay dad badan oo ka mid ah dadkan - laakiin marna ma ogaan doontid taas adoo isbarbardhigaya astaamaheena internetka. Waxaa laga yaabaa inay tahay maxaa yeelay waxaan ku cabbiraa guusheyda inta qof ee aan caawiyo, ma ahan xeebta aan ku fadhiyo.
Iyo sababo la yaab leh, daacadnimadayda internetka ayaa si uun loo arkaa inay waxyeello u tahay sumcadeyda shaqsiyadeed ee dad badan oo ka mid ah warshadayda. Warshadaha aad u erayga ereyada sida daahfurnaanta iyo daacadnimo. Waxay yihiin wax laakiin.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan iska daba maray boqolaal qof oo ka tirsan warshadayda, waxaana jira xulashooyin dhawr ah oo aan sii wado ku lug lahaanshahooda. Waxay la wadaagaan halganka caafimaadka maskaxda ee shaqsiyeed, mararka qaarkood mid aad u gaar ah. Waxay la wadaagaan halganka caafimaad iyo isbadalka. Waxayna la wadaagaan caqabadaha ganacsigooda. Waan ku dhiirigelinayaa iyaga, waxayna igu dhiirrigelinayaan inaan noqdo qof ka wanaagsan, hoggaamiye fiican, aabbe ka wanaagsan, iyo qof ganacsade fiican.
Sida Loogu Noqo Daacadnimo Badan Online
Waxaan la yaabanahay xitaa inaan qoro ereyadaas, laakiin waxaan aaminsanahay inay lagama maarmaan yihiin. Waa tan waxa aan jeclaan lahaa in aan arko hoggaamiyeyaasha suuqgeynta oo ku sameynaya joogitaankooda internetka:
Adi daciifnimadooda iyo caqabadaha haysta. Dhammaanteen waan leenahay iyaga, waana wax dhiirrigelin leh marka qofka aad kor u eegto inuu wax la wadaago.
Weydii caawimaad. Qof kastaa wuxuu u baahan yahay caawimaad, ka jooji isku dayga inuu iska dhigo inaad jawaabaha oo dhan hayso.
Share iftiinka badan. Iyada oo dhagaystayaasha oo ay gaareen saameynayaashan, sidee ayey u tahay wax cajiib ah markay qirtaan kuwa u halgamaya inay fiiro gaar ah u yeeshaan internetka?
Iskuday kuwa kale inay fulin karaan wixii aad soo qabatay. Dhammaanteen waan ka soo gudubnay dhibaatada si aan u gaarno halka aan joogno, annaga oo la wadaagayna sida aad ku timid meeshii aad joogtay aan u ogaano inay sameyn karaan, sidoo kale.
Warbaahinta bulshada ayaa bixisa fursaddan cajiibka ah ee lagu dhisi karo isku xirnaanta aadanaha ee khadka tooska ah. Ma jiro wax aadanaha ka badan oo ka hooseeya is-hoosaysiinta, guuldarrada, madaxfurashada, iyo daciifnimada, ma jirtaa? Waxaa laga yaabaa inaanan laheyn taageerayaal badan sida kuwa kale ee warshadayda ay leeyihiin, laakiin waxaan kuu xaqiijin karaa inaan xiriir hoose oo qoto dheer la leeyahay dadka i soo raaca.
Xaqiiqdii, waxaan farsameyn lahaa shaqsiyaad been abuur ah, kaliya waxaan la wadaagi karaa guusha ganacsigeenna, waxaanan soo jiidan karaa dad badan oo raacsan. Laakiin waxaan ka jeclaan lahaa cilaaqaadka dhabta ah ee aan sameeyay sanadihii la soo dhaafay intii aan riixi lahaa been aan la heli karin.
Tags: sumad shaqsiyeedMedia Social Suuq
Podium: Ururi oo maamul dib u eegista ku jirta Hal Madal oo Bartamaha ah
Pimex: Maamul oo Lacag u samee Hogaaminta Suuqgeyntaada
Sep 18, 2016 at 9: 10 AM
Anigu ma ihi milkiile ganacsi, inta badan waxa aad leedahay si toos ah aniga iima khusayso. Iyo, kuma jiro baraha bulshada. (Waxaan u qoraa maqaallo ganacsi asxaabta iyo qoyska, sidaa darteed sidaan ugu soo galay goobtaada anigoo cilmi baaris ku wada.) Si kastaba ha noqotee, runtii waan ku riyaaqay maqaalkaaga - Uma maleynayo inaan horay ula soo kulmay wax si daacadnimo leh hadda ka hor ah. Way fiicantahay in la arko milkiile ganacsi oo guuleysta oo run ka dhigaya, marka waad mahadsan tahay.
Sep 19, 2016 at 3: 33 PM
Aad baad u mahadsantahay, Rita!
Sep 19, 2016 at 6: 47 PM
Anigu waxaan ahay ruux ruux leh khibrad aadamiga… mmmm. Waxaan H eh ELTAHAYN Dadku inay noloshooda ku noolaadaan 'sida ugu buuxda… iyadoo la hubinayo inay iyagana taa beddelkeeda caawiyaan kuwa kale markaan sii korayno ..
Maqaalka cajiibka ah ..laakiin ma waxaad tahay munaafaq… sidaan ku dhaartay…. Sanduuqa arbushinka ayaa igu soo dhoweeyay halkaas dhowr ilbiriqsiyo ka hor… marka..HAA iyadoo la ixtiraamayo I ..Waxaan sugi doonaa bal inaan arko jawaabtaada iyo iyagana malaha Wadahadal may
Sep 19, 2016 at 9: 48 PM
Hagaag, ma hubo waxa sanduuqa soo baxa uu igu sameeyo aniga oo daacad ka ah warbaahinta bulshada. Fadlan ii sheeg.